↑ Associate Press. (14 October 2003). "Full house for Mother Teresa ceremony Archived 17 October 2003 at the Wayback Machine.". CNN. Retrieved 30 May 2007.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မာသာ_ထရီဆာ&oldid=679024" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၀:၄၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။